Madaxwayanaha Puntland oo ku dhawaaqay joojinta gudniinka fircooniga+Sawiro – SBC
Madaxwayanaha Puntland oo ku dhawaaqay joojinta gudniinka fircooniga+Sawiro
Posted by Webmaster on Noofember 28, 2011 Comments
Madaxwaynaha Puntland ayaa maanta ku dhawaaqay joojinta gudiinka fircooniga ah, kadib kulan hal maalin qaatay oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaaday 60 Culumowdiin oo ka kala yimid dhamaan Puntland iyo Dalka dibadiisa kuwaas oo ka doodayey joojinta Gudinka Fircooniga iyo diintu waxaa ay ka qaybto.
Waxaana kulankaani soo qaban qaabisay Wasaradaha Caddalada oo gacan ka helayay ha’yada Unicef, Barnaamijkan ka dhanka ah gudiinka fircoonigu waxaa mudooyinka ka socday deeganada Punaland kaasi oo dadka laga wacyi galinayey dhibaatoyinka caafimaad ee uu gaysto hablaha loo gudo fircooniga oo ah caado dhaqameed ay inta badan gabadhaha ugutaan qosaska soomaliyeed.
kulanka maanta waxaa khubado kala duwan ka jeediyey masuuliyiin wasaaradaha cadaalada iyo Haweenka iyo culuma awdiinka waxa dhamaan diirada lagu saaray dhibaatoyinka uu gaysto gudniinka fircooniga ah.
Wasiirka wasaarada Haweenka iyo arimaha qoyska Marwo Caasho Geele Diiriye oo wasaaradeeda lagu qabtay kulanka maanta ayaa sheegtay in ay mudo olole balaaran ugu jireen soo afjarida caadada gudninka fircooniga ah oo waxaana ay intaas ku dartay in wasaaradeedu wado olole kale oo mudo socon doona loogana hortagayo shaqaaqoyinka dumarka lagula kaco oo inta badan dumarka dhibaato loogu gaysto.
Madaxwaynaha Punland C/rixmaan Shiikh Maxamed Faroole oo khudbad dheer jeediyey ayaa sheegay in Puntland laga joojiyey gudniinka fircooniga isla markaana ay horay ujoojiyeen golaha xukuumada iyo golaha barlamaanka Puntland,
Madaxawaynuhu waxaa uu sheegay in mudo badan uu soo jiray caadada fircooniga oo dhibaato badan gaarsiyey hablo aad u fara badan caalamkuna uu mar hore ka guuray walina uu ku harsanyahay Africa waliba soomaliya Puntland ay horseed u tahay in Soomaaliya laga joojiyo.
Khudbada madaxwaynaha oo dheerayd waxay taabaynaysay dhinacyo badan waxaana uu kaga hadlay dhanka guurka oo uu dhibaato ku tilmaamay in aan la guursan dadka qaarkiis isla markaana ay la kulmaan quursi iyaga oo aan la guursan waxaana uu sheegay in taasi ay tahay caado xun oo aan waxba ka jirin dadka soomalida ahna ay isku nasab yihiin ugu dambayntii madaxwaynuhu waxaa uu kula dardaarmay culumada diintu in ay wacyigalin ka sameeyaan quursiga nasabka ku salaysan.
Shirkan waxaa uu noqonayaa kii ugu balaarnaa oo culuma awdiinka Puntland ka yeeshaan caadada gudninka fircooniga ah oo mudo badan ay istimaalayeen dadka Soomaliyeed iyadoona mudooyinkii ugu dambeeyey ay deeganada Puntland ay ka socdeen wacyigalino la xiriira joojinta gudninka fircooniga ah .
Noofember 28, 2011 at 4:12 pm
hahaha waa loo Bahan yahay Gudniinka Fircooniga ah Ragu in ay ka Hadlaan oo ka soo Hor jeestaan ku Dhaqankiisa Ciribtirkisana Qayb weyn ay ka Qataan sababtoo ah Camarka Dumarka waa ku Yaal lakiin Raga ayaa Isticmaalah Micnaha Macdanta 2da Boowdo ee Dumarka Raga ayaa ku Manafacadah.ha Noolaado Madaxwenaha PL
Yusuf jacayl says:
Noofember 29, 2011 at 5:34 am
ASCWW. Salan qiimo leh kadib aad baan oga xun nahay hadalkii madaxweynaha puntland ee farole uu ku yiri lagu gudi karo hablaha bataatanba oo ha ahaadeen sidii ay ku dhasheen oo sidaad ha lagu guursado micnaha buuryaqab ha ahaadeen waxaas caadi islaam iyo mid diimeed midna ma ahan in aan gabdhaha la gudin wan kasoo horjeednaa gudniinka fircooniga ah ee hablaha wax lagu yeelaynayo laakiin in guud ahaan gudniinka la mamnuuco aad baan oga xun nahay hadii aan nahay dhalin diimeedka puntland somalia thanks alaahu akbar alaabu akhbar alaahu akhbar
Noofember 29, 2011 at 8:12 am
dadkii hore ayaa saxsanaa in gabdhaha loo gudo habka fircawniga sababtu waxaa weeye gabdhu xaaraan ku dhici mahayso oo sida badane balse tan sunniga ugadan yaa hayn karaya ooo ilaa ay boqol utagto mooyee ma joogsanayso xagga tankale ay dhawrsantahy
gudniinka fircawnigu faaiidiiyin muhiim ah ayuu leeyahy waxaa ka mid ah : 1- dhawrsanaan 2- sharafta gabadha oo bad baada aiyo nwaalid keda
Noofember 29, 2011 at 8:27 pm
waa loobaahanyahay inlajoojiyo gudniika gabdha waxyeelaya sida fircoonga
waan loogudaa sida aydiinta islaamku kaqabto
UBAX QALANJO UK says:
Noofember 30, 2011 at 6:28 am
woooooooooooooow yaab madaxweynaha puntland waxa uu yiri gabdhaha ha laga dhigo BUURYAQAB oo yaan la gudin bisinka waxaas waa muslin ka baxe maxay tahay gabdhaha yaan la gudin waaa wareey ma tanay noo rogotey war iska jira hadalkaas charterka QM ayaa qoraya ayuu yiri in aan gabdhaha la gudin ee buuryaqab ha haadeen sida reer galbeedka oo kale .woooooooooooooooow
Abdi nuur osman says:
Noofember 14, 2012 at 9:02 pm
Asc salan kadib magaceygu wa abdi nur osman oo ku sugan galgaduud gar ahan magalada guri ceel? Fikrad ahan waxan qaba wa in aan gabar dhigeda la dhowro hilibkedana aan lajarin?
Noofember 14, 2012 at 9:18 pm
Allah madaxwene faroole wa warsax ah sababto ah dumarku nolasha guurka mahayan wayoo waxa maqan qebti raxada sas darted aye san ku ogen gurku in oow nololyahay marka waxan dhihi lahay habraha gabdhaha hadilinina
galgaduud gar ahan guricel?